Yuweri Musevani Madaxweynaha Uganda “Ogolaan mayno in Masar u caga jugleyso Itoobiya” – idalenews.com
Iyadoo ay jirto walaac weyn oo laga qabo in muranka biyaha wabiga Niil uu dhaliyo dagaal lagu hoobto oo ka dhaca Geeska Africa ayaa hada waxaa saaxadii kusoo biiray madaxweynaha dalka Uganda oo ay ciidamo ka joogaan gudaha Somalia xili khuburo militari oo ka socota dalka Masar ay iyaguna ku sugan yihiin gudaha Somalia.
Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Musaveni ayaa digniin hawada umarayay dalka Masar isagoo sheegay in Africa aysan ogolaan doonin cagajuglaynta iyo hanjabaada Masar kuhayso dalka Ethiopia.
‘‘Waxaan saxaafada la khariyo ku arkay hadalada kasoo baxaya Masar ee la xidhiidha qorshaha amaanta mudan ee Ethiopia ku dhisayso biyaxidheenka korontada dhaliya,’’ ayuu yidhi Musaveni.
‘‘Waa qorsha mudan in Africa oo dhan ay sameyso, waana sababta keentay in dhaqaalaha Ethiopia uu kor ukaco, sidaa darteed waxaan waxaa talo ah in xukuumada cusub ee Masar iyo kooxaha wadaniyiinta xagjirka ah ee Masar inaysan ku celin khaladaadkii dowladihii hore ee Masar,’’ ayuu mar kale yidhi Musaveni.
Musaveni wuxuu madaxda dalka Masar ugu baaqay inaysan ku kadsoomin siyaasihii khaldanaa ee madaxdii hore ee Masar.
Wuxuu hoosta ka xariiqay in khatarta wabiga Niil(Nile) aysan ahayn in biyaxidheen laga sameeyo balse ay tahay koronta la’aanta iyo hormar la’aanta kajirta dalalka uu maro.
Musaveni wuxuu sheegay in Masaaridu ay doonayeen inay qalajiyaan dhulka biyaha leh ee Koonfurta Suudaan iyagoo isticmaalaya kanaalka Jonglei.
‘‘Arintan ayaa qeyb ka ahayd sababihii dadka Koonfurta Suudaan ula dagaalameen dowlada Suudaan oo markaa gacansaar la lahayd siyaasadihii khaldanaa ee khatarta ahaa ee dowladihii Masar ee markaa jiray,’’ ayuu markale yidhi Musaveni.
‘‘Waan u sheegay aragtideeyda dowladii hore ee Masar iyo tan maanta jirta waxayna taladu tahay in la xakameeyo hadalada xamaasadaysan ee kasoo baxaya Masar si caqligal ahna loogu wada xaajoodo gudaha ururka dooxada Niil,’’ ayuu ku taliyay Musaveni.
Hadalka madaxweynaha Uganda ayaa kusoo beegmaya xili xidhiidhka labada dal (Ethiopia iyo Masar ) uu marayo meeshii ugu xumeeda iyagoo saxaafada isku weydaarsaday hanjabaadyo.
Khilaafka u dhaxeeya Ethiopia iyo Masar ayaad moodaa inuu saameyn doono Jamhuuriyada Somalia sababtoo ah Masar waxay khuburo militari usoo dirtya Somalia kuwaas oo lagu sheegay in Somalia ay ka caawin doonaan dhismaha militariga taas oo ay Ethiopia u arki karto khatar iyad kusoo wajahan.
Daawo: 59 jir Somali ah oo 2 naag iyo 1 Nin ku dilay Xarun Business oo ku taala Magaalada St. Loius ee gobalka Missouri ee dalka Mareykanka